JiffyCoin စျေး - အွန်လိုင်း JIF ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို JiffyCoin (JIF)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ JiffyCoin (JIF) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ JiffyCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ JiffyCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
JiffyCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
JiffyCoinJIF သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0068JiffyCoinJIF သို့ ယူရိုEUR€0.0058JiffyCoinJIF သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00521JiffyCoinJIF သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00624JiffyCoinJIF သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0613JiffyCoinJIF သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0432JiffyCoinJIF သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.152JiffyCoinJIF သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0256JiffyCoinJIF သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.00906JiffyCoinJIF သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00954JiffyCoinJIF သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.152JiffyCoinJIF သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0527JiffyCoinJIF သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0366JiffyCoinJIF သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.508JiffyCoinJIF သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.1.15JiffyCoinJIF သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00934JiffyCoinJIF သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0104JiffyCoinJIF သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.211JiffyCoinJIF သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0472JiffyCoinJIF သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.726JiffyCoinJIF သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩8.06JiffyCoinJIF သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦2.64JiffyCoinJIF သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.497JiffyCoinJIF သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.188
JiffyCoinJIF သို့ BitcoinBTC0.0000006 JiffyCoinJIF သို့ EthereumETH0.00002 JiffyCoinJIF သို့ LitecoinLTC0.000127 JiffyCoinJIF သို့ DigitalCashDASH0.00008 JiffyCoinJIF သို့ MoneroXMR0.00008 JiffyCoinJIF သို့ NxtNXT0.555 JiffyCoinJIF သို့ Ethereum ClassicETC0.00102 JiffyCoinJIF သို့ DogecoinDOGE2.06 JiffyCoinJIF သို့ ZCashZEC0.00008 JiffyCoinJIF သို့ BitsharesBTS0.268 JiffyCoinJIF သို့ DigiByteDGB0.226 JiffyCoinJIF သို့ RippleXRP0.0245 JiffyCoinJIF သို့ BitcoinDarkBTCD0.000239 JiffyCoinJIF သို့ PeerCoinPPC0.0231 JiffyCoinJIF သို့ CraigsCoinCRAIG3.16 JiffyCoinJIF သို့ BitstakeXBS0.295 JiffyCoinJIF သို့ PayCoinXPY0.121 JiffyCoinJIF သို့ ProsperCoinPRC0.869 JiffyCoinJIF သို့ YbCoinYBC0.000004 JiffyCoinJIF သို့ DarkKushDANK2.22 JiffyCoinJIF သို့ GiveCoinGIVE14.99 JiffyCoinJIF သို့ KoboCoinKOBO1.58 JiffyCoinJIF သို့ DarkTokenDT0.00626 JiffyCoinJIF သို့ CETUS CoinCETI19.99